ယာဉျမောငျးနှငျသူတှအေတှကျ ဘယျကားတှကေ ယခုလကျရှိမှာ အကောငျးဆုံး ကားတှဖွေဈနလေဲ? - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ယာဉျမောငျးနှငျသူတှအေတှကျ ဘယျကားတှကေ ယခုလကျရှိမှာ အကောငျးဆုံး ကားတှဖွေဈနလေဲ?
Consumer Report (ယာဉျမောငျးနှငျသူမြား စဈတမျး) အရ ၂၀၂၀ အတှကျ လုံခွုံရေးနညျးပညာ မွငျ့မားမှု၊ စကျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ ဈေးနှုနျးတို့ကိုနှိုငျးယှဉျကာ ထိပျဆုံးအဆငျ့ကားအမြိုးအစား ၁၀ စီး သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ နညျးပညာမြားကို ယခငျက ထညျ့သှငျးတှကျခကျြခဲ့ခွငျးမရှိသျောလညျး ၂၀၂၀ တှငျ ပထမဦးဆုံးအနဖွေငျ့ ထညျးသှငျး စဉျးစားလာခွငျး ဖွဈသညျ။ ယခုနှဈအတှကျ ထိပျဆုံးစာရငျဝငျ ကား ၁၀ စီးတှငျ Toyota Supra နှငျ့ Tesla Model3တို့လညျး ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
ပါဝငျယဉျပွိုငျခဲ့ကွသော Brand ၃၃ ခုတှငျ No (1) Porsche, (2) Genesis, (3) Subaru တို့ဖွဈကွပွီး Subaru မှာ ယခငျနှဈကက အဆငျ့2ရရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ Mazda နှငျ့ Luxus တို့က အဆငျ့ ၅ ပတျဝနျးကငျြတှငျ ရှိပွီး အမရေိကနျ Brand တဈခု ဖွဈတဲ့ Lolicon ကတော့ အဆငျ့ ၁၃ နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။ အဆငျ့ အနှိမျ့ပိုငျး brand မြားကတော့ ယခငျနှဈအတိုငျး အပွောငျးအလဲ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အဆိုပါ report အတှကျ ပွုလုပျခဲ့သော စမျးသပျမှုမြားတှငျ အရေးပျေါသုံး အလိုအလြှောကျ break system, Forward Collision Warning, နှငျ့ စတငျအသုံးပွုလာကွပွီဖွဈသော Blind spot warning system မြားလညျး ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
ယာဉ်မောင်းနှင်သူတွေအတွက် ဘယ်ကားတွေက ယခုလက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး ကားတွေဖြစ်နေလဲ?
Consumer Report (ယာဉ်မောင်းနှင်သူများ စစ်တမ်း) အရ ၂၀၂၀ အတွက် လုံခြုံရေးနည်းပညာ မြင့်မားမှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဈေးနှုန်းတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကားအမျိုးအစား ၁၀ စီး သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို ယခင်က ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ၂၀၂၀ တွင် ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ထည်းသွင်း စဉ်းစားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွက် ထိပ်ဆုံးစာရင်ဝင် ကား ၁၀ စီးတွင် Toyota Supra နှင့် Tesla Model3တို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ပါဝင်ယဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော Brand ၃၃ ခုတွင် No (1) Porsche, (2) Genesis, (3) Subaru တို့ဖြစ်ကြပြီး Subaru မှာ ယခင်နှစ်ကက အဆင့်2ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Mazda နှင့် Luxus တို့က အဆင့် ၅ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိပြီး အမေရိကန် Brand တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Lolicon ကတော့ အဆင့် ၁၃ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ အဆင့် အနှိမ့်ပိုင်း brand များကတော့ ယခင်နှစ်အတိုင်း အပြောင်းအလဲ မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ report အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သော စမ်းသပ်မှုများတွင် အရေးပေါ်သုံး အလိုအလျှောက် break system, Forward Collision Warning, နှင့် စတင်အသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်သော Blind spot warning system များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
BANKS [PRIVATE] နှင့်ပက်သက်သော လုပ်ငန်း ၅၇၇ ခုကိုရှာဖွေရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ထူးခွားဆနျးသဈမှုအပွညျ့နဲ့ 2020 Lexus